Xildhibaannada Laga Soo Doorto Koonfur Galbeed Oo Kulan Wadatashi Ah Kaga Furmay Muqdisho – Kalfadhi
August 27, 2018 August 27, 2018 Kalfadhi
Qaar kamida Xildhibaannada labada gole ee Baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan kuwo deegaan doorashadoodu tahay Koofur Galbeed ayaa Magaalada Muqdisho waxaa uga furmay kulan ay kaga tashanayaan xaaladaha ka jira gobollada ay dadkooda ku metelaan dowladda dhexe.
Xildhibaan Idiris Dhaqtar oo ka mid ahaa xildhibaanadii kulankaas ka qeyb galay ayaa sheegay in shirkaan oo socon doona mudo todobaad ah ay sidoo kale ku lafa gurayaan dhinacyada siyaasada,doorkii awood qeybsiga beelaha waxa ka hirgalay maadaama sida uu sheegay markii ay ku noqdeen Xildhibaannadu goboladii laga soo doortay ay soo aruuriyeen cabashooyin badan.
Halkan ka daawo hadalka Xildhibaan Idriis.
Xildhibaan Axmed Mayow Cabdulle “ Ruush “ waxa uu ugu baaqay Xildhibaannada gobolladaas ka soo jeeda ee kulanka ka maqan ugu baaqay iney soo dedejiyaan imaanshohooda si ay talo ugu yeeshaan kulankooda iyo qoraalka rasmiga ah oo ay soo saari doonaan kaas oo ay hor geyn doonaan Golayaasha Baarlamaanka.
Halkan ka daawo hadalka Xildhibaan Ruush
Xildhibaan Maxmed Xuseen Afaraale oo ka mid ah xildhibaannada ka qayb galay shirk oo isna la hadlay Kafladhi waxa uu sheegay in muhiim gaar ah ay siin doonaan dhibaatada ka taagan jidka isku xira Muqdisho iyo Baydhabo.
Dhageyso Wareysiga Afaraale
Kulan Ay Yeesheen Guddiga Joogtada Ee Golaha Shacabka Oo Looga Hadlay Furitaanka Golaha